Gaashaanlle Sare Oo Lagu Dilay Magaalada Muqdisho. – Calamada.com
Gaashaanlle Sare Oo Lagu Dilay Magaalada Muqdisho.
calamada January 31, 2019 1 min read
Rag hubeysan ayaa degmada Xamar Weyne ee magaalada Muqdisho ku dilay sarkaal sare oo katirsanaa ciidamada dowladda Federaalka.
Raggii dilka geystay ayaa si nabad gelya ah goobta uga baxsaday, Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa durbadiiba sheegatay mas’uuliyadda weerarka “Mujaahidiinta ayaa degmada Xamar Weyne ku khaarijiyay Sarkaal katirsanaa kooxda Ridada oo darajadiisa ciidan ay aheyd Gaashaanlle Sare” ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Xarakada Mujaahidiinta Al Shabaab.
Goobta uu weerarku ka dhacay ayaa ah mid xasaasi ah waxaana aad ugu xooggan askarta iyo saraakiisha dowladda Federaalka, maalin ka hor ayay aheyd markii sidaan oo kale Xarakada Mujaahidiinta Al Shabaab ay qarax ku dishay saraakiil ku sugnaa halka loo yaqaan Daljirka Daahsoon oo aan sidaas uga fogeyn xarumaha waaweyn ee dowladda.
Previous: Milliteriga dalka Suudaan Oo Ballanqaaday ilaalinta Dowladda Al-bashiir.
Next: Ku Dhawaad 150 Itoobiyaan Ah Oo Ku Haftay Biiyaha Badda Cas.